Calendar | Somaliland.Org
29 March 2009 — Waxa dadweynuhu u dareerayaan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Somaliland, taasoo muddo sannad ku dhow maamulka Daahir Riyaale ku darsatay wakhtigii sharcigu siinayay.
13 February 2009 — Waa maainta kama dambayn laga sugayo in xisbiyada qaranku soo xereeyaan magacyada labada musharax ee madaxweyne iyo madaxweyne-ku-xigeenka ugaga qaybgalaya doorashooyinka dalka ka dhici doona 29-ka bisha March.
9 February 2009 — Maanta waxa ku buuxda 300 oo casho oo Daahir Riyaale ku sii fadhiyo kursiga isaga oo aan la soo dooran.
3 February 2009 — Laba garab oo xisbiga UDUB ah ayaa mid waliba geestiisa u furtay shirweyne uu ku soo dooranayo musharixiinta uga qayb gali doonta tartanka doorashada madaxweynaha, taasoo ka dhalatay kadib markii Md. Riyaale ka mamnuucay xubno badan oo asaaseyaasha xisbiga ahaa inay ka soo xaadiraan shirweynaha xisbiga.
Maamulka Daahir Riyaale ayay muuqataa inaan laga xakamayn adeegsiga hay’adaha amniga iyo imkaaniyaadka kale ee qaranka ka dhexeeya, kadib markii uu ciidanka militariga iyo booliiska u isticmaalay inuu kaga horjoogsado garabka kale ee xisbiga UDUB oo xaq dastuuri ah u leh inay meeshii ay doonaan ku qabsadaan shirweynahooda. Nidaamka Daahir Riyaale ugu adeegsaday ciidanka qaranka fulinta danihiisa siyaasiga ah ayaa khilaafsan sharciga Somaliland.
Labadii Shir ee Maanta Ay Ku Kala Qabsadeen Hargeysa UDUB-ta Dawliga Ah, Iyo UDUB-ta Dimoqraadiga Ah
Dildillaaca Xisbiga UDUB oo saameeyey Ammaanka Hargeysa
29 January 2009 — Xisbiga UCID ayaa shirweynihiisii qabsaday kuna doortay laba musharax oo uga kala qaybgali doona tartanka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne-ku-xigeenka. Xubno ka mida ah xisbiga UCID ayaa ka dareeray shirka iyaga oo ka biyodiiday qaabka loo soo abaabulay shirka.
26 August 2008 — Xisbiga KULMIYE ayaa noqday xisbiga ugu horreeyay ee ayaa shirweynihiisii qabsaday kuna doorta musharixiinta uga kala qaybgali doona tartanka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne-ku-xigeenka. Inkasta oo shirka ay ka cadhoodeen xubno ay hoggaaminayaan Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax iyo Mudane Axmed X. Cali Cadami oo isagu markii dambe ku qancay wadahadallo u furmay kooxdiisa iyo hoggaanka xisbiga.
Xisbiga KULMIYE Oo Doortay Murashaxiinta Madaxwene Iyo Madaxweyne Ku Xigeen Ee Uga Qeybgeli Doona Doorashoyinka